Qodobbada dibedda laga keeno oo soo saaro qaab muuqaal oo muuqaal ah oo ku jira faylka CAD-ga
Juunyo, 2017 AutoCAD-AutoDesk, Featured, topografia
Inkasta oo aan ka walaacsanahay dhamaadka layli sidan oo kale waa in ay curiyaan qaybaha iskutallaabta ay weheliyaan stroke dhidibka ah, xisaabi Muga goynta, qararka, ama profiles isla, fiiri qaybta this jiilka of model dhul digital ka marka loo dhoofiyo dhibcood, sidaas darteed waxaa laga hirgalin karo by user kale. Si aad wax dheeraad ah waxaana caan amarrada AutoCAD in English, waxaan u magacaabi doonaa in English.
Tababarkan waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo la adeegsanayo "CivilCAD". Haddii aadan haysan, dhamaadka waxaan ku tusinaynaa sida loo soo dejiyo.
Haddii aad rabto inaad kobciso layligan tallaabo tallaabo, waxaad isticmaali kartaa faylka tusaalaha ee loo yaqaan sts.txt, kaas oo dhamaadka qoraalka lagu tilmaami karo sida loo helo.
CivilCAD waxay soo saari kartaa isku-duwayaasha qaabka dhibcaha ee noocyada kala duwan, kiiskan waxaan isticmaali doonnaa xogta laga helay sahankan oo lagu sameeyay faylka faylka, halkaas oo qodobada ay ku kala soocayaan iskuxirada, qaabka soo socda: Lambarka dhibcaha, Iskuxirka X, Iskuxirka Y, Duulinta iyo faahfaahin.
Tan waxaa lagu sameeyaa: CivilCAD> Qodobada> Dhulka> Soo-dejinta
Guddiga soo muuqda, waxaan dooran karnaa doorashada nXYZ, maaddaama aan danaynayno soo dejinta sharaxaada, waxaanu dooranaynaa nooca sharaxaadda sharaxaadda.
Xulo aqbal badhanka OK Oo waxaan doorannay faylka, taas oo kiiskan waxaa loo yaqaan «sts.txt«. Nidaamku wuxuu bilaabaa soo dejinta qodobbada iyo dhowr ilbiriqsi kadib, fariin waa in ay ka muuqato hoosta iyadoo tilmaameysa inta dhibcood laga keeno. Xaaladdan waa inaad tilmaantaa inaad ku soo gashay dhibcaha 778.
Si aad u aragto dhibcaha, Nooca Baahan ee Dheer ayaa loo baahan yahay. Wanaagsan leh calaamadda ama kumbuyuutarka isticmaalaya X> gal> X> gali.
Cabbirka dhibcaha waxay kuxirantahay qaabka aad u leedahay, si aad u bedesho tan ayaa la sameeyaa Nooca> Muuqaalka Muuqaalka, ama adigoo isticmaalaya amarka ddptype
Haddii aad rabto inaad aragto cabirka muujiyay sawirka, isticmaal nooca dhibicda la tilmaamay iyo xajmiga 1.5 qaybo qeexan.
Sida aad arki karto, dhammaan qodobbada waa la soo dhoofiyaa, iyada oo ku xigana waxa lagu qeexay kiiska kuwa leh.
Sidoo kale eeg in heerarka qaarkood loo abuuray sida waafaqsan macluumaadka la soo dejiyey:
CVL_PUNTO waxa ku jira qodobada
CVL_PUNTO_NUM waxa ku jira sharaxaad
CVL_RAD waxay ku jiri doontaa macluumaadka dhibcaha ee sahan sahlan.
heerarka Color waa la bedeli karaa oo dhibcood midabka ag marayo ka jaalaha ah inay ByLayer, si ay u bartaan lakabka midabka iyo waa u fududahay in ay arki.
Haddii aad haysato shaashadda AutoCAD ee caddaan ah, waxaad u bedeli kartaa isticmaalka madow Qalabka> ikhtiyaarrada> Muuji> Colors ... Midab madow oo mugdi ah ayaa sahlan in lagu sawiro walxaha ku jira midabada cagaaran sida jaalaha.
Hadda waxaan u baahanahay inaan badalno qodobbada aan u soo qaadanno qaab muuqaal ah. Taas awgeed, waa in aan xirnaa lakabyada aanan u baahnayn.
Tani waxaa la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo jadwalka:
CivilCAD> Layers> Ku dhaaf. Kadibna waxaan taabannaa hal dhibic oo aan ku qorno. Iyadoo tanina, kaliya lakabta dhibicda waa inay muuqaneysaa. Sidoo kale talaabada xigta waa lagama maarmaan in dhammaan qodobbada la arki karo.
Si loo abuuro saddex-xaglood waxaan sameynaa:
CivilCAD> Altimetry> Saddex xagal (Triangulation)> Terrain. Qeybta hoose waxay na weydiisaa haddii aan dooneyno in aan ku saleyno dhibcaha hadda jira ama khadadka horukaca horay loogu soo dejiyey khariidada. Tan iyo wixii aan hayno waa dhibco, waxaan qoraynaa warqad Pmarkaa waan sameynaa Ku qor. Waxaan dooranaa dhammaan walxaha iyo hoosta waa inaad noo sheegtaa in ay jiraan 778 dhibcaha la doortay.
Waxaan mar kale samaynaa Ku qor, iyo nidaamkeenu wuxuu na weydiistaa illaa inta aan u adeegsaneyno xaglaha saddexaad ee dhibcaha xajmiga. Xaaladdan ayaanu isticmaali doonaa Mitirka 20, iyada oo tixgelinaysa in sahanku la sameeyay mashiinka qiyaasta xNUMX.
Waxaan qoraynaa 20markaa waan sameynaa Ku qor.
Waxaan u taaganahay xagal hoose 1 shahaadada aan sameyno Ku qor waana inay natiijadu noqotaa:
Lakab la yiraahdo CVL_TRI ayaa la abuuray kaas oo ka kooban 3D oo la soo saaray.
Abuuri Curves Heerka
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee muuqaalka sawir-qaadashada ayaa abuuraya heerarka heerarka hoose. Tan waxaa lagu sameeyaa: CivilCAD> Altimetry> Currica Levels> Terrain
Halkan waxaan ku tusinaynaa in curyaaminta labaad (oo lagu magacaabo CivilCAD) ay ku jiraan mitir kasta 0.5 iyo kuwa ugu muhiimsan (qaro weyn) mitir kasta 2.5 kasta.
Oo si aad u jilciso gooladaha ee geesaha isticmaali doono qodob ka mid ah 4.4 iyo natiijada waa in ay ahaataa image hoos ku qoran.
Post Previous«Previous Talaabooyinka in ay curiyaan map a la isticmaalayo drones
Post Next ... oo soo urursadeen geobloggers halkan ...Next »
Hal Jawaab u Jawaab "Qodobbada la soo dhoofiyo lana abuuro qaab muuqaal dhuleed oo ku jira faylka CAD"
RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA isagu wuxuu leeyahay:
Hoos udhex galka muito